Iindaba - Iphepha leethishu Isimemo soMboniso weTekhnoloji yeLizwe
Iphepha leethishu lama-27 leMiboniso yeTekhnoloji yeHlabathi
Izakubanjwa kwiziko i-Nanjing International Expo Centre ukusuka nge-24 ukuya kuma-26 kuSeptemba
Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba ubekho kwaye sijonge phambili ekusebenzeni kunye nani ngesandla.
Ukuya kubuchwephesha bephepha lasekhaya.
Inombolo yomnquba ilungile
IHolo 7, 7S39
● Kulungile Intshayelelo yeNkampani ●
Jiangxi Kulungile inzululwazi netekhnoloji co., LTD. Ngaba amashishini aphezulu-obuchwephesha agxile kwi-r & d kunye nakwimveliso yokuvelisa iphepha elisebenza ekhaya, isigqumathelo somatshini wokuvelisa ngokuzenzekelayo, kunye nomatshini wephepha ohamba ngesantya esiphezulu，indawo esele ikhona yokwakha ifektri ye-340000 yeemitha zesikwere, indawo yokusebenzisa zii-18000 zeemitha zesikwere, abasebenzi abangama-800, badlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo ye-ISO9001 esemgangathweni kunye nesatifikethi se-European Union CE.
Ingcinga ka-Enterprise ithi "Ukuzithemba kuvela kubuchule bobuchwephesha; ukuthembana kuvela kumgangatho ogqibeleleyo" kwaye inkolelo yethu ithi "Umgangatho ulungile; Abathengi phambili ”. I-Enterprise elungile iye yakha inkqubo yenkonzo esebenzayo nehlangeneyo kwaye ibonelela abathengi ngenkonzo ekumgangatho wokuqala kuthethwano lobuchwephesha, iimveliso ezikhetha ukufaka nokulungelelanisa, uqeqesho lwetekhnoloji kunye nokhathalelo lokugcina.
01 Imveliso yeNkwenkwezi
Umgangatho wokuveliswa kweTissue oPhezulu oPhezulu we-120
Isantya esongelayo: 3000 amaphepha / min
Umgca wemveliso unokuvelisa zombini i-napkin folds kunye ne-1/6 ye-napkin folding ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi baseTshayina.Umveliso wemveliso yamkela i-servo drive, ulawulo oluchanekileyo lokubala, kwaye inokuvelisa amaqhekeza angama-20 ~ 50 / iimveliso zephakheji, okanye zilungiselelwe wena ngokweemfuno zabathengi. Kuxhotyiswe ngemisebenzi emininzi yokubeka ingqokelela yomsebenzi kumatshini wokupakisha, onokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeendlela ezahlukeneyo zentengiso, kwaye unokunxibelelana nenkqubo yokufaka izinto ezizenzekelayo kwinkampani yethu kwimveliso yokusebenza komgca wonke kulula, ubhetyebhetye kwaye ulungele .
02 Imveliso yeNkwenkwezi
KULUNGILE-3600/2900Isantya esiphezulu seTishu yobuso beMveliso yokuSonga ngokuzenzekelayo
Ukukhawuleza: 200meter / min okanye i-15 logs / min
Umgca wokuvelisa isantya esiphezulu uneemodeli ezimbini: ububanzi be-2900 mm kunye ne-3600 mm, ngolawulo olupheleleyo lwe-servo, isiqingatha sokuqala sisebenzisa inkqubo ye-adsorption. Kuxhotyiswe ngemizila eyahlukeneyo yelog yokusika umatshini wokusika, isantya somatshini omkhulu sinokufikelela kwi-200 m / min okanye kwi-15 iinkuni / imizuzu, wonke umgca usebenzisa i-accumulator yephepha lephepha lephepha kunye ne-package package. Umgca wonke uxhotywe ngomatshini opakishayo opheleleyo wobuso be-servo, umatshini wokupakisha ohluka-hlukeneyo kunye nokupakisha okuzenzekelayo, kwaye unokuhambelana neemveliso eziqhelekileyo kunye neeMveliso ze-E-yorhwebo, amandla emihla ngemihla anokufikelela kwiitoni ezingama-30-50. Kwaye kungenziwa kukhethwe ophezulu-ngqo calendaring yethu oluzenzekelayo, embossing, iglu unit wokulaminetha imveliso ye iimveliso ezahlukeneyo babebhala, iimveliso itawuli ekhitshini, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo emarikeni
Ngummangaliso ngakumbi umxholo, siza kubhengeza kulo mboniso
Wamkelekile umnquba wethu
Iholo 7 7S39
Bamba isandla nawe
Vula entsha amaxesha ye iphepha lasekhaya
Oumgca wenkonzo yesiza:
【Kulungile Inkampani ipanorama】
【Kulungile iVidiyo yeSiseko seVidiyo】